लम्सुवाघाटमा सांसदको ध्यान जाओस् – silichung.com
लम्सुवाघाटमा सांसदको ध्यान जाओस्
सम्पादकिय १२ पुष २०७४, बुधबार १५:१७ 165 पटक हेरिएको
सडक विभागको बेवास्ता र ठेकेदारको लापरबाहीले उत्तरी षडानन्द नगरपालिका र छिमेकी संखुवासभा जिल्ला जोड्ने अरुण नदीको लम्सुवाघाटमा निर्माणाधिन पक्की पुल ६ बर्षदेखि अलपत्र छ । सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङटार स्रोतका अनुसार हालसम्म २० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको छ । विगत केहि बर्षयता ठेकेदार पनि बेखबर छ । निर्माणाधिन स्थलमा कोही छैनन् । निर्माण सामाग्री यत्रतत्र, अलपत्र छन् । उक्त पुल विभागले टेन्डर आह्वान गरी ३ बर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने सम्झौतामा स्वच्छन्द निर्माण सेवाले ठेक्का लिएको हो । १४ करोडको लगानीमा निर्माण सुरु भएको थियो । ०६७ असोज २५ गते सम्झौता गरी ०६८ मंसिरमा तत्कालिन भौतिक तथा योजना मन्त्री विजयकुमार गच्छ्यदारले शिल्यानास गरेका थिए । म्याद गुजे्रको पनि ३ बर्ष भैसकेको छ ।
भोजपुरको उत्तरी क्षेत्रको लाइफलाइन मानिएको यो पुल नबन्दा स्थानीहरुलाई सास्ती छ । विकासे पुर्वाधार बिस्तारमा असर पारेको छ । अत्यावश्यक खाद्यसामाग्री देखी निर्माणका सामाग्रीहरु डुंगामा महँगों शुल्क तिरेर तथा सतिघाटको झोलुगें पुलमा ज्यानको जोखिम मोल्दै मोटरसाइकल लगायत सवारीसाधन तार्नुपर्ने बाध्यता छ । दुर्घटना, गर्भवती र गम्भिर प्रकतिका विरामीहरुलाई समयमा उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पु¥याउन नसक्दा बर्षेनी अकालमा ज्यान गुमाउदै आएका छन् । यो बेल्टमा बर्षेनी करोडौ मुल्यको रुद्राक्ष र अन्य जडिबुटि उत्पादन हुन्छ । आर्थिक चलखेल, शैक्षिक, धार्मिक तथा पर्यटकिय क्षेत्रसंग जोडिएको जिल्लाभित्रकै एक मुख्य क्षेत्र हो । तर बर्षैादेखि निर्माण हुन नसक्दा सम्भावना बोकेको यो भेगको विकास बर्षैा पछि धकेलिदैछ ।
पुल चाडो बनाउनपर्ने कि त अरुण नदि सुकाइदिनपर्ने, यो उत्तरीबासीको साझा माग हो । जिल्लामा प्रत्येक पटकका निर्वाचनका उम्मेदवारको साझा एजेण्डा पनि लगभग यस्तै हुन्छ । तर जितेर गैसकेपछि फर्केर हेरेका भए ६ बर्ष बित्दासम्म यस पुल २० प्रतिशतमा मात्रै सिमित बन्नुपर्ने थिएन । भोजपुर यस्तो जिल्ला हो । यहिको माटोकी चेली विद्यादेवी भण्डारीले देशको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पद हाकिरहेकी छन् । पटक–पटकका मन्त्रीहरुले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्छन् । सरकारी प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि जिल्लाको प्रतिनिधित्व कम छैन । पहँचका हिसाबले निक्कै माथि रहेको यस जिल्लामा बिडम्बना एउटा पुल बन्न सकेको छ्रनैन ।
स्थानीयले लामो समयदेखि अपलपत्र पुल चाडो बनाउन पटक पटक माग राख्दै आएका छन् । उनीहरुको आवाजलाई न जितेर गएका राजनीतिक नेतृत्वले सम्बोधन गरेका छन् । न त सडक विभागले ठेकेदारलाई कार्यक्षेत्रमै ल्याउन सकेको छ । सडक डिभिजनको कार्यालयमा ५ पटक त धर्ना नै बसिसकेका छन् । भर्खरै सकिएको निर्वाचनबाट चुनिएका सांसदहरुलाई खोयधाशिघ्र सम्पन्न गर्न पहल गर्न पुनः ध्यानाकर्षण गराएका छन्, स्थानीयले । सुदेश पराजुलीको संयोजकत्वमा दबाब संघर्ष समिति गठन गरेर सांसदहरु सुदन राई, राजेन्द्रकुमार राई र शेरधन राईलाई पुल निर्माण चाडो गर्न पहल गरिदिन आग्रह गर्दै मागपत्र पेश गरेका छन् । पुल निर्माण सम्पन्न नहुन्जेलसम्मका लागि संखुवासभाको चेवाबेशि र षडानन्दको कात्तिकेघाटमा फेरी संचालन गर्न पनि माग राखेका छन् ।
जहिल्यै माग पत्र पेश गर्दै ध्यानाकर्षण गराउदै बस्नुपर्ने हो यहाँका स्थानीयले ? गम्भिर प्रश्न देखिएको छ । सडक विभागले ठेकेदारलाई कार्यक्षेत्रमा ल्याउछु भन्ने आश्वासन कहिलेसम्म र नेताहरुले सहि थाप्ने कतिन्जेलसम्म ? जिल्लाको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन हुदा निर्माणाधिन पुलमा चासो कहिले जान्छ ? जनताको अमुल्य भोट मागपत्र सहितको ध्यानाकर्षणका लागि हो र ? अगाडि लालाहित बनाउने जितेर पनि काम गरेर नदेखाउने हो भने निर्वाचित सांसदहरुको दिनगन्ति आजैबाट सुरु भैसकेको छ । पुल बन्न सकेको खण्डमा जिल्लाको समग्र विकासको एक महत्वपुर्ण पाटो बन्न जान्छ । यहाँका ९ स्थानीय तह मध्येको आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटकिय सम्पन्नता बोकेको तह हो यस षडानन्द नगरपालिका । यसका लागि पुल अत्यावश्यक पुर्वाधारका रुपमा खड्केको छ । यसमा नवनिर्वाचित सांसदहरुले ध्यान पु¥याउन सक्नु मुख्य आवश्यकता बनेको छ । नत्र सयपत्रिका फुल गलाभरी लगाएर विजय उत्सब मनाएर हिडेका बेला चर्काएको भाषणको प्रतिफल आफैतिर चोरीऔला भएर फर्कनेछ ।